I-infographic: 21 Izibalo zeendaba zeNtlalo ekuthi uMarketer ngamnye kufuneka azi ngo-2021 | Martech Zone
I-infographic: 21 Izibalo zeendaba zeNtlalo ekuthi uMarketer ngamnye kufuneka azi ngo-2021
NgoLwesibini, Juni 29, 2021 NgoLwesibini, Juni 29, 2021 Elena Teselko
Ngaphandle kwamathandabuzo impembelelo yemithombo yeendaba zentlalo njengejelo lokuthengisa inyuka minyaka le. Amanye amaqonga avela, anje ngeTikTok, kwaye amanye ahlala ngokufana ne-Facebook, ekhokelela kutshintsho oluqhubekayo kwindlela yokuziphatha kwabathengi. Nangona kunjalo, ngokuhamba kweminyaka abantu beziqhelanisa neempawu ezithiwe thaca kwimidiya yoluntu, ke abathengisi kufuneka bavelise iindlela ezintsha zokuphumelela kwesi sitishi.
Kungenxa yoko le nto ukujonga imeko yakutshanje kubalulekile kuyo nayiphi na ingcali yentengiso. Thina Uscan Ugqibe kwelokuba uwenze lula lo msebenzi kwaye ulungiselele i-infographic equlathe iinyani kunye neenkcukacha-manani njengeentlobo ezikhethiweyo zomxholo kumaqonga ahlukeneyo, indlela yokuziphatha kwabathengi kwi-Intanethi, ukuthelekiswa kokuzibandakanya kumaqonga awahlukeneyo.
Izibalo zeVidiyo yezeNtlalontle:
Ngo-2022, i-84% yayo yonke imixholo yemidiya yoluntu iya kuziswa yokuzonwabisa.
I-51% yeempawu sele zikho usebenzisa iividiyo endaweni yemifanekiso kwi-Instagram.
I-34% yamadoda kunye ne-32% yabasetyhini bayakhangela iividiyo zemfundo.
I-40% yabasebenzisi ingathanda ukubona ngaphezulu imilambo enophawu.
I-52% yabasebenzisi bakhetha ukubukela Iividiyo ezi-5-6 zemizuzu kuxhomekeke eqongeni.
Iinkcukacha-manani zoNxibelelwano lwezeNtlalontle:
I-68% yabasebenzisi bayayifumana Umxholo ophawulweyo iyadika kwaye ayibonakalisi.
I-37% yabasebenzisi beendaba zosasazo baskrolela ukutya okufunwayo iindaba. I-35% yabasebenzisi bayayikhangela nokuzonwabisa.
Memes Ugqithisile i-emoji kunye nee-GIF ngokuthandwa kwaye ngoku sesona sixhobo siphambili sonxibelelwano kwi-Intanethi.
Umxholo wokuzonwabisa sisizathu sokuqala sokusebenzisa TikTok.
Imithombo yeendaba yeNtlalo yabathengi kunye neNkcukacha-manani zabaphulaphuli:
85% TikTok Abasebenzisi bayasebenzisa Facebook, okanye iipesenti ezingama-86 ze Twitter abaphulaphuli nabo bayasebenza kwi Instagram.
I-45% yabasebenzisi kwihlabathi liphela kunokwenzeka ukuba bajonge iimveliso kwimidiya yoluntu kunakuqala zeenjini.
I-87% yabasebenzisi bayavuma ukuba imithombo yeendaba zentlalo ibancedile ukwenza i isigqibo sokuthenga.
Iipesenti ezingama-55 zabasebenzisi banazo uthenge iimpahla ngokuthe ngqo kumaqonga onxibelelwano.
Iinkcukacha-manani zeMpembelelo kwezeNtlalo:
I-1.00 yeedola nganye isetyenziswe ekwakheni ubudlelwane nayo abachaphazelayo Ibuyisa umndilili we-5.20.
50% Twitter abasebenzisi bake bathenga into emva kokuzibandakanya ne-tweet yomququzeleli.
Iipesenti ezingama-71 zabasebenzisi bayazenza izigqibo zokuthenga ngokusekwe kwiingcebiso ezinefuthe kwinethiwekhi yoluntu.
Iimpembelelo ezincinci babe nenqanaba lokuzibandakanya le-17.96% kwiTikTok, 3.86% kwi-Instagram, kunye ne-1.63% kwiYouTube, ukuvelisa ukubandakanyeka ngakumbi kunabaphembeleli beMega ababenamaxabiso okuzibandakanya nge-4.96% kwiTikTok, 1.21% kwi-Instagram, nakwi-0.37% kwiYouTube.
Iinkcukacha-manani zeQonga lezoLuntu:
I-37% yabasebenzisi beTikTok bane umvuzo wekhaya $ 100k + ngonyaka.
Iipesenti ezingama-70 zolutsha ziyazithemba YouTube bayalandela, ngaphezu kwabo bonke abantu abadumileyo.
6 ngaphandle kwe10 Abasebenzisi beYouTube kunokwenzeka ukuba balandele iingcebiso ze-vlogger kunaye nawuphi na umphathi weTV okanye umdlali weqonga.
Ama-80% abantu abanomdla kwimveliso kuthenga emva kokubukela uphononongo kwi-YouTube.
Ngo-2020, izinga lokubandakanya kwi Instagram inyuke nge-6.4%. Kwangelo xesha, inani lezithuba kwi-Instagram feed lehla: uninzi lweemveliso zitshintshele ekuthumeleni amanye amabali.
Uscan liqonga lobukrelekrele bemithombo yeendaba eline-AI elinamandla okuqonda umfanekiso kushishino. Sinceda amashishini ukuba ahlalutye izimvo zabathengi, afumane ukuqonda okunokwenzeka, kunye nokulawula igama lophawu.
tags: 2021i-ciscoFacebookinstagramimpembelelo megalwatshisoUmphembeleli omncinciingcacisoiinyani kwimidiya yoluntukwimidiya yoluntuamanani eendaba ezentlaloizibalo zemidiya yoluntuTikTokTwitterukubhloga kwevidiyoukuvotasihlalaubanyoutubeYouTube
U-Elena Teselko ngumphathi womxholo kwi Uscan. Uneminyaka engaphezu kwemihlanu yamava kwezentengiso nakunxibelelwano, kubandakanya ukusebenza kwiarhente yentengiso, iinkampani ze-IT kunye nemithombo yeendaba.
Uyenza njani iVidiyo yakho yeChannel kunye neChannel
Yintoni ifuthe lokuThengisa ngezeNtlalo?